मोटो भएर हैरान हुनुहुन्छ ? रातको समयमा भुलेर पनि नखानुहोस यि चिज – Krazy NepaL
March 8, 2021 640
पिज्जा– हर उमेर तहका मानिसका लागी पिज्जा लोकप्रिय खानेकुरा हो । तर यसलाई रातीमा खानु राम्रो मानिदैन् किनकी यसमा चिजको मात्रा बढी हुन्छ । साथै पिज्जामा चिनी र रिफाइन कार्ब्स हुन्छ जसका कारण तौल बढ्छ ।
Prevबिहेको त्यो पहिलो रात ! जब उनी सुक्क सुक्क गरेर रुन थालिन् – वास्तविक मनछुने कथा”
Nextमुख तथा सास गनाउने समस्याले लज्जित हुनुपरेको छ ? उसोभए यस्ता छन् छुटकारा पाउने उपाय
सम्बन्ध विच्छेद भैसकेपछि पनि अन्तिममा यसरि भएको रहेछ पुनर्मिलन (भिडियो सहित)
होशियार ! कि’ड्’नी फेल हुँदा श’री’र’ले देखाउँछ यस्तो सं’केत,